बदलिँदै सत्ता समिकरण, समाजवादीको ‘एक्जिट’ राजपाको ‘इन’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बदलिँदै सत्ता समिकरण, समाजवादीको ‘एक्जिट’ राजपाको ‘इन’
बदलिँदै सत्ता समिकरण, समाजवादीको ‘एक्जिट’ राजपाको ‘इन’
पुस ८ गते, २०७६ - १५:१२
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच गत पुस २ मा अपत्यारिलो रुपमा २ बुँदे सम्झौता भयो । नेकपाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर राजपासँग २ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्नेदेखि दुई पार्टीबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
राजपाका नेताहरु सत्तारुढ दलसँग छलफलका लागि पटक–पटक प्रर्यत्न गर्दै आएका थिए । सत्तारुढ नेकपा र राजपा नेपालबीच विगत ११ महिनादेखि औपचारिक वार्ता र छलफलसमेत हुन सकेको थिएन् । तर गत पुस २ मा भएको सम्झौतासँगै नेकपा र राजपाबीचको सम्बन्धले यूटर्न लिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा र तराई मधेश क्षेत्रको प्रभावशाली पार्टी राजपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भएसँगै सत्ता समिकरणबारे पनि सम्भावना बन्दै गएको छ । दुई पार्टीबीच राजनीतिक सहकार्य गर्ने सम्झौता भएसँगै सत्ता साझेदारको विषयमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि नेकपा र राजपाबीचको सम्बन्ध निकट बन्दै गएको थियाे ।
२ बुँदे सम्झौतासँगै समाजवादीको ‘एक्जिट’
गत पुस २ मा सत्तारुढ नेकपा र राजपा नेपालबीच २ बुँदे सम्झौता भएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अनेकन खालका अड्कलबाजी सुरु भईसकेको थियो । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको धेरैको आंकलन थियो । समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत दिएको प्रतिक्रियाले पनि त्यहि जनाउँथ्यो ।
नेकपा र राजपा नेपालबीच सम्झौताभएसँगै चर्चित मिडियाहरुले “बालुवाटारमा राजपाको ‘इन्ट्री’, सिंहदरबारबाट समाजवादीको ‘एक्जिट’ !” भन्ने शिर्षकमा समाचारहरु बनाउन सुरु गरिसकेका थिए । धेरै सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो ओपनियनका रुपमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट ‘एक्जिट’ हुँदै गरेको खुलाएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएका वृत्तान्तले पनि समाजवादीको सत्ताबाट ‘एक्जिट’को सम्भावना बढाएको थियो । पछिल्लो समय मन्त्रालय हेरफेर गरिएको सन्दर्भले पनि उपेन्द्रसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध निकै चिसिएको टिप्पणी बाहिर आएको थियो । उपेन्द्रलाई स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालय पुर्याइएसँगै उपेन्द्र सरकारमा सहभागि नहुने चर्चा चलेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद फेरफेर भएसँगै स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका उपेन्द्रले दिएको प्रतिक्रियाले पनि उनको असन्तुष्टी चर्को दखिन्थ्यो । मन्त्रालय फेरेर आफुँलाई होच्याएको उपेन्द्रको ठहर थियो ।
राजपासँग किन निकट भयो नेकपा ?
राजपा नेपाल प्रदेश नं. २ को ठुलो पार्टी हो । केन्द्रिय तहमा समाजवादी पार्टी केहि ठूलो देखिएपनि राजपा तराई मधेशमा भने निकै प्रभाव राख्दछ । नेकपा नेतृत्व राजपाको तराई मधेशमा देखिएको प्रभावबाट फाइदा लिन र आफ्नो गुम्दै गएको साखलाई जोगाउने ध्याउन्नमा छ । तराई केन्द्रित दलहरुबीच देखिएको दरारमा नेकपा नेतृत्व तराईमा आफ्नो पकड फैलाउन चाहन्छ । राजपासँगको निकटता पनि त्यसैको अर्को पाटो भएको धेरै विश्लेषकको ठम्माई छ ।
गत पुस २ मा दुई पार्टीबीच सम्झौता भएलगत्तै नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले पनि त्यहि संकेत गर्दछ । राजपा नेपालसँग २ बुँदै सम्झौता भएलगत्तै नेकपा वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फेसबुकमार्फत राजपासँगको सम्झौतालाई ऐतिहासिक काम भनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
दुई पार्टीबीचको सहमतिसँगै नेकपाका नेताहरु पनि निकै उत्साहित देखिएका थिए । सहमतिसँगै प्रदेश नं. २ मा नेकपालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक सिट फाइदा हुने देखिएको छ । यसअघि प्रदेश नंं २ को राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन थियो । नेकपा र राजपाबीच गठबन्धन भएसँगै कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले कुनै पनि स्थान जित्ने सम्भावना छैन् ।
नेकपा नेतृत्व प्रदेश नं. २ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि गठबन्धन मात्रै नभएर सरकार परिवर्तको खेलमासमेत रहेको कतिपयको टिप्पणी छ । राजपासहितका अन्य दलसँगको गठबन्धन बनाएर नेकपाले प्रदेश २ मा सत्ता परिवर्तनको प्रर्यत्न गर्न खोजेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वैशाख १७ मा तराई मधेश फोरमका अध्यक्षलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै गर्दा प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व चाँडै नेकपाले लिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । राजपा र फोरमबीचको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई ढलाउने उनको संकेत थियो । प्रचण्डले गरेको संकेत राजपासँगको निकटाले खुलाउँदै लगेको छ ।
१९ महिनाको सत्ता यात्रामा उपेन्द्र
अन्ततः समाजवादी पार्टी नेपालको पदाधिकारी वैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । २ बुँदै सम्झौता गरेर सर्तसहित सरकारमा सहभागि भएको समाजवादीले सत्तारोहणको करिब १९ महिनापछि बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो । ०७५ जेठ १८ मा तत्कालिन समाजवादी फोरम संविधान संशोधनसहितको सर्त राख्दै सरकारमा सहभागि भएको थियो ।
तत्कालिन समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा भएको सम्झौतामा पनि सरकारबाट बाहिरिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । पटक–पटकका पदाधिकारी वैठकमा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुरा उठेपनि उपेन्द्रले निर्णय लिईसकेका थिएनन् ।
सत्तारोहण गर्दै गर्दा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट नहुनु र मन्त्रालय हेरेफेरसँगै सत्ता नेतृत्वसँगको सम्बन्ध चिसिँदै जानुले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पुस ८ गते, २०७६ - १५:१२ मा प्रकाशित
कोरोना अपडेट : विश्वभर ४८ हजार थपिए, २३ सय बढीको एकैदिन मृत्यु
विश्वले सिक्नुपर्ने पाठ : बिना ‘लकडाउन’ दक्षिण कोरियाले कसरी जित्दैछ कोरोनाविरुद्धको लडाईँ ?
अपडेट : कहाँ के भयो ? इटली, अमेरिका र स्पेनकाे अवस्था डरलाग्दो
लकडाउनको उल्लंघनकाे परिणामः कैयन देशमा महामारी, हजारौंको मृत्यु, स्पेनमा हेलिकप्टर परिचालन
नेपाल पठाउने सामाग्रीको तयारी छेन्दुमा गर्दै चीन
‘लकडाउन’को पहिलो दिन, यस्ताे देखियाे काठमाडौं (फोटो फिचरसहित)
विश्वका १९२ देशमा देखियो कोरोनाको संक्रमण, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति कोरोना संक्रमित ?
कोरोना भाईरस लागेका पहिलो नेपाली अहिले के गर्दैछन् ?
के छ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा ? पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्
विश्वका १८१ देशमा कोरोना, कुन देशमा कति संक्रमित ? हेर्नुहोस् तथ्यांक
चिकित्सककाे सुझाव विपरित किन जबरजस्त सक्रिय बन्न खोज्दैछन् ओली ?
रोचक कथा –किन लगाउँदैनन् प्रचण्डले दौरा सूरुवाल ?